वीरको पुरानो कोबाल्ट मेसिन नष्ट गर्न भारत असफल, क्यानडा लाने तयारी – Health Post Nepal
२०७५ फागुन १० गते ९:१९
वीरमा ४० करोडको ‘टोमोथेरापी’
नेपालकै पुरानो र ठूलो सरकारी अस्पताल वीरले देशमै पहिलोपटक क्यान्सररोगको उपचारका लागि अत्याधुनिक उपकरण ‘टोमोथेरापी’ भित्र्याएको छ । क्यान्सरको उपचारमा अन्य उपकरणको तुलनामा ज्यादै न्यून साइड इफेक्ट गर्ने तर प्रभावकारिताका हिसाबले अब्बल मानिएको अत्याधुनिक उक्त प्रविधि दुई महिनापछि सञ्चालनमा आउने अस्पतालले जनाएको छ ।
क्यान्सरपीडितको करिब ७० प्रतिशतमा आवश्यक पर्ने रेडियोथेरापी उपचारपद्धति नेपालमा हालसम्म कोबाल्ट मेसिनमार्फत दिँदै आइएको छ । चलनचल्तीको यो प्रविधि वीरसहित नेपालका जम्मा पाँचवटा अस्पतालमा उपलब्ध थिए । त्यसमा पनि २७ वर्षअघि जडित वीरको कोबाल्ट मेसिन ३ वर्षदेखि कामै नगर्ने गरी बिग्रिएपछि वीरमा यो सेवा पूर्णतः ठप्प थियो । अवरुद्ध सेवा सञ्चालनका लागि नयाँ अत्याधुनिक प्रविधियुक्त टोमोथेरापी मेसिन ३ महिनाअघि नै ल्याइपुर्याइए पनि पुरानो कोबाल्ट मेसिन विस्थापन, जनशक्ति तथा भौतिक व्यवस्थापनलगायतमा समस्याका कारण अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यससँगै उपकरण सञ्चालनार्थ आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण सेवाप्रवाहमा समस्या निम्तिने संकेत देखापरेको छ ।
स्वस्थ सेललाई असर नपुर्याई क्यान्सरसेललाई मात्र मार्ने क्षमता
हालसम्म नेपालमा क्यान्सररोगको उपचारमा प्रयोग गरिँदै आएका प्रविधिले क्यान्सरसेललाई मात्र नभई अन्य सेललाई समेत नष्ट गर्ने वा क्षति पुर्याउने हुन्छ । तर, टोमोथेरापीमार्फत उपचार गराउँदा क्यान्सरसेल मात्र नष्ट हुने र अन्य सेललाई असर नगर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । क्यान्सररोगका बिरामीलाई अप्रेसन गर्नुपूर्व नै रेडियोथेरापी दिनुपर्ने हुन्छ, जसले ट्युमरको आकार सानो बनाएर अप्रेसन गर्न सहज बनाउँछ ।
मोथेरापी मेसिन नेपाल आइपुगेको तीन महिना बित्दा पनि ३ वर्षदेखि बिग्रिएर काम नदिएको पुरानो कोबाल्ट मेसिन हटाउन नसक्दा नयाँ मेसिन सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । ‘कोबाल्ट मेसिनमा धेरै विकिरण हुने भएकाले जहाँ पायो त्यहीँ फाल्न मिल्दैन,’ वीरका निर्देशक डा. भूपेन्द्रकुमार बस्नेतले भने ।
३ वर्षदेखि ठप्प रेडियोथेरापी सेवा सुचारु हुँदै, अझै २ महिना लाग्ने
२७ वर्षअघि क्यानडाबाट ल्याइएको कोबाल्ट मेसिन ०७२ मा बिग्रिएपछि वीरमा क्यान्सरको उपचार प्रभावित हुँदै आएको थियो । २ वर्षअघि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले वीरमा रेडियोथेरापीका लागि अत्याधुनिक मेसिन खरिदका लागि बजेटलगायत आवश्यक व्यवस्था मिलाएका थिए । नयाँ उपकरण आएसँगै देशकै ठूलो र सबै वर्गका नागरिकको पहुँच भएको वीरमा ३ वर्षदेखि पूर्णतः ठप्प भएको रेडियोथेपरी सेवा पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ । यसबाट निम्न आयस्तरका र अति विपन्न क्यान्सरपीडितको पनि उपचारमा पहुँच पुग्नेछ ।
नयाँ ‘टोमोथेरापी’को प्राविधिक परीक्षण तथा उपकरण जडान गर्नुपर्ने भएकाले सञ्चालनमा ल्याउन करिब २ महिना लाग्न सक्ने अस्पतालले जनाएको छ । यसबीचमा अत्याधुनिक मेसिन सञ्चालनका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अहम् चुनौती अस्पतालसामु छ ।
बिग्रिएको मेसिन विस्थापन गर्न नसक्दा नयाँ सञ्चालनमा ढिलाइ
अमेरिकी ‘इकुरे’ नामक कम्पनीले उत्पादन र विकास गरेको ‘टोमोथेरापी’ उपकरण वीरले ४० करोडमा खरिद गरेको हो । टोमोथेरापी मेसिन नेपाल आइपुगेको तीन महिना बित्दा पनि ३ वर्षदेखि बिग्रिएर काम नदिएको पुरानो कोबाल्ट मेसिन हटाउन नसक्दा नयाँ मेसिन सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । ‘कोबाल्ट मेसिनमा धेरै विकिरण हुने भएकाले जहाँ पायो त्यहीँ फाल्न मिल्दैन,’ वीरका निर्देशक डा. भूपेन्द्रकुमार बस्नेतले भने । हाल नयाँ टोमोथेरापी उपकरण सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी अस्पताल बलम्बुमा राखिएको छ ।
पुरानो मेसिन नष्ट गर्न भारत असफल, क्यानडा लाने तयारी
वीरले नयाँ मेसिन खरिदको टेन्डर आह्वान गर्दा नै टेन्डर पार्ने कम्पनीले नै पुरानो कोबाल्ट मेसिन नष्टसमेत गर्नुपर्ने सर्तनामा गराएको थियो । तर, मेसिन नष्ट गर्न भारतमा असम्भव भएपछि समस्या सिर्जना भएको हो । पछिल्लो समय उक्त मेसिन क्यानडा लगेर नष्ट गर्ने प्रक्रिया बढाइएको छ । यसका लागि क्यानडाबाट कन्टेनरसहितका जनशक्ति नेपाल आइसकेको अस्पतालले जनाएको छ ।
कोबाल्ट मेसिनमा अत्यधिक विकिरण हुने भएकाले त्यसको मानव स्वास्थ्यमा पर्ने घातक असरबाट जोगाउन सुरक्षित स्थान र अत्याधुनिक प्रविधिको सहायताले मात्र नष्ट गर्न मिल्ने निर्देशक बस्नेत बताउँछन् । ‘अत्याधुनिक ‘टोमोथेरापी’ ल्याउनका लागि टेन्टर पार्ने व्यक्तिले नै पुरानो कोबाल्ट मेसिन विस्थापित गर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, पुरानो कोबाल्ट मेसिनमा भएको रेडिएसन नष्ट गर्न भारतमा असफल भएपछि अहिले क्यानडामा लगेर नष्ट गर्न लागिएको छ । यसका लागि क्यानडाबाट कन्टेरनरसहित जनशक्ति नेपाल आइसकेको छ ।’
नेपालमा हाल काठमाडौं क्यान्सर सेन्टर, नेपाल क्यान्सर अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा मात्र रेडियोथेरापी सेवा उपलब्ध छ । यस्ता उपकरणमार्फत रेडियोथेरापी दिँदा क्यान्सरसेलसँगै अन्य स्वस्थ सेलसमेत मर्ने हुँदा बिरामीमा सिथिलता आउनुका साथै साइड इफेक्ट बढी हुने गरेको छ । तर, वीरमा जडान गर्न लागिएको अत्याधुनिक टोमोथेरापीको साइड इफेक्ट तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेकाले उपचारमा ठूलो राहत पुग्ने बताइएको छ । नेपालमा भर्खरै भित्र्याइएको टेमोथेरापी उपकरण छिमेकी मुलुक भारतमा ६–७ वटाको संख्यामा रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
के हो ‘टोमोथेरापी’ ? के फरक छ चलनचल्तीको कोबाल्टभन्दा ?
टोमोथेरापी रेडिएसन प्रविधिबाट क्यान्सररोगको उपचारमा प्रयोग गरिने अत्याधुनिक उपकरण हो । यसको प्रयोग बिरामीको शरीरमा फैलिएका क्यान्सरका सेलहरू मार्न गरिन्छ । यो अत्याधुनिक उपकरणमा क्यान्सरयुक्त सेललाई मात्र रेडिएसन दिने क्षमता हुन्छ । यसको प्रयोगले क्यान्सरसेल नष्ट हुन्छ, तर अरु सेललाई असर गर्दैन । पहिलेका कोबाल्ट मेसिनमार्फत रेडिएसन दिँदा क्यान्सर सेलसँगै अन्य सेललाई पनि असर गर्ने गरेकोमा नयाँ प्रविधिले जोखिम न्यूनीकरण गर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
टोमोथेरापी उपकरणमार्फत उपचार गर्दा बिरामीलाई साइडइफेक्ट कम हुन्छ । टोमोथेरापीमार्फत क्यान्सररोगीको ट्युमरमा धेरै र वरिपरि कम डोजको रेडिएसन दिएर क्यान्सरसेललाई मात्र नष्ट गर्न सकिन्छ ।
कोबाल्टमार्फत उपचार गर्दा बिरामीलाई रेडिएसन दिएको २ वर्ष नपुगीकन पुनः दिनुहुँदैन भन्ने थियो । तर, टोमोथेरापीमा रेडिएसन दिएको केही समयपछि आवश्यकताअनुसार पुनः दिन सकिन्छ ।
टोमोथेरापी शल्यट्युमरका लागि बढी उपयोगी हुन्छ । शरीरका सम्पूर्ण भागमा फैलिएका क्यान्सरसेल नष्ट गर्न टोमोथेरापी उपकरण महत्वपूर्ण साबित हुँदै आएको छ ।
टोमोथेरापी उपकरणमार्फत रेडियोथेरापी दिँदा भारतमा ५ लाख रूपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा प्रविधि उपलब्ध नहुँदा भारत पुगेर महँगो शुल्कमा उपचार गराउन बाध्य नेपाली क्यान्सरपीडितले अब भने रहत पाउने भएका छन् ।
एकजनालाई २० मिनेट, दैनिक ५५ जना क्षमता
टोमोथेरापीमार्फत एकजना बिरामीलाई रेडियोथेरापी दिन करिब २० मिनेट लाग्छ । वीरका क्यान्सर विभाग प्रमुख डा. विवेक आचार्य भन्छन्, ‘टोमोथेरापी उपकरणले एक दिनमा सामान्यता ५५ जनासम्मलाई सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।’
भारतमा ५ लाख, वीरमा करिब १५ हजार मात्र
टोमोथेरापी उपकरणमार्फत रेडियोथेरापी दिँदा भारतमा ५ लाख रूपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा प्रविधि उपलब्ध नहुँदा भारत पुगेर महँगो शुल्कमा उपचार गराउन बाध्य नेपाली क्यान्सरपीडितले अब भने रहत पाउने भएका छन् । वीरमा यो सेवा लिएबापत बिरामीले १० देखि १५ हजार रूपैयाँ मात्र तिरे पुग्ने अस्पतालले जनाएको छ । यद्यपि, सेवा सञ्चालनमा आइनसकेको अवस्थामा अस्पतालले शुल्कको यकिन टुंगो भने लगाइसकेको छैन ।
उपलब्ध जनशक्ति अपुग हुने
वीरको क्यान्सर विभागमा कार्यरत दक्ष जनशक्ति टोमोथेरापी उपकरण चलाउन अपुग हुने देखिएको छ । उपलब्ध जनशक्तिले मात्र मेसिन चलाउँदा मागबमोजिमको सेवा दिन नसकिने विभागले जनाएको छ । ‘अहिले हामीसँग भएको जनशक्तिले टोमोथेरापी उपकरण सञ्चालनमा ल्याउन समस्या हुने देखिन्छ,’ क्यान्सर विभाग प्रमुख डा. आचार्य भन्छन्, ‘त्यसका लागि अस्पताल प्रशासनसँग थप जनशक्तिको माग गरेको छु ।’
हाल वीरको क्यान्सर विभागमा मेडिकल फिजिसियन १, थेरापी टेक्नोलोजिस्ट २ र क्यान्सररोग विशेषज्ञ ४ जना कार्यरत छन् । यसमध्ये टोमोथेरापी सञ्चालनका लागि ४ जना विशेषज्ञ चिकित्सक पर्याप्त भए पनि फिजिसियन ३ जना र टेक्नोलोजिस्ट ८ जना अवश्यक हुने विभागको भनाइ छ । ‘टोमोथेरापी उपकरण चलाउन फिजिसियन थप २ जना, थेरापी टेक्नोलोजिस्ट थप ६ जना आवश्यक पर्छ,’ डा. आचार्यले भने ।
टोमोथेरापी मेसिन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ, अस्पतालले टोमोथेरापी सञ्चालनका लागि मापदण्डअनुरूपको नयाँ संरचना बनाउन लागेको छ ।
उपकरण अभावले घट्दै थिए बिरामी
कोबाल्ट मेसिन सञ्चालनमा हुँदा वार्षिक १ हजार ३ सयदेखि १ हजार ५ सयसम्म क्यान्सरका बिरामीले भर्ना भएर उपचार गराउने गरेको अस्पतालको तथ्यांकले देखाउँछ । तर, ०७२ मा कोबाल्ट उपकरण बिग्रिएपछि भने उपचार प्रभावित भएका कारण त्यो संख्या घटेर ६ देखि ७ सयमा झरेको विभाग प्रमुख डा. आचार्य बताउँछन् । अधिकांश क्यान्सरपीडितका लागि आवश्यक पर्ने रेडियोथेरापी सेवा नै अवरुद्ध भएपछि बिरामी घट्नु स्वाभाविक हो । अब अन्यत्र अनुपलब्ध अत्याधुनिक प्रविधि जडानपछि वीरमा क्यान्सरका बिरामीको चाप थेगिनसक्नु हुने कुराको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
२७ वर्ष पहिले जडान गरिएको कोबाल्ट मेसिनबाट ८ हजार बिरामीले सेवा लिएका थिए । डा. आचार्य भन्छन्, ‘भर्ना भएका क्यान्सरका बिरामीमध्ये ७० प्रतिशतले रेडियोथेपारीबाट उपचार लिनुपर्ने हुन्छ ।’